अनुहारमा एक पटक लगाएर हेर्नुहोस् लसुन, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कारी लाभ – Dailny NpNews
अनुहारमा एक पटक लगाएर हेर्नुहोस् लसुन, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कारी लाभ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: १०:१४:४१
सफा, मुलायम, चम्किलो अनुहार कसरी बनाउने ? यसका अनेकौ काइदा छन्। घरेलु विधिबाट पनि अनुहारलाई चम्किलो र मुलायम बनाउन सकिन्छ ।
धेरैले अनुहारको सौन्दर्यका लागि बेसन, गुलाब जल, घिउकुमारी, बेसार, दूध, मह जस्ता घरेलु वस्तु उपयोग गर्ने गरेका छन्। यद्यपि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, प्याज र लसुनको प्रयोगबाट पनि अनुहार चम्किलो बनाउन सकिन्छ ।
प्याज र लसुन हरेकको भान्सामा सजिलै उपलब्ध हुने वस्तु हो। त्यसैले आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि यसको फेसप्याक बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
छालाको लागि वरदान प्याज: प्याजमा केही प्रकारको भिटामिन हुन्छ । यो एन्टी अक्सिडेन्टको खजाना पनि हो । यसको जुसमा एन्टी सेप्टिक, एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी इन्फलेमेट्री गुण पाइन्छ । यसको नियमित प्रयोगले अनुहारको दाग हटाउन सकिन्छ।
रुखोपन हटाउने लसुन: लसुनमा भिटामिन–सी, भिटामिन बी–६, सेलेनियम, जिंक र फाइटोन्यूट्रीएट्स पाइन्छ । यसका साथै यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण पाइन्छ । यसले डन्डीफोर हटाउन पनि सघाउँछ ।
कसरी गर्ने प्रयोग ? नियमित रुपमा एक वा दुई केस्रा लसुन सेवन गर्न सक्नुहुनेछ । यसले अनुहारको छालामा निखार ल्याउनुका साथै पेट सम्बन्धी कतिपय समस्या पनि हटाउँछ । लसुनको रस वा पेस्ट बनाएर प्रयोग गर्दा अनुहारको रुखोपन हट्छ।
फेसप्याक बनाउने विधि: – लसुनको पाँच वटा केस्रा र एउटा प्याजलाई पानीमा सफा गर्ने । त्यसलाई मिक्सरमा राखेर पिस्ने । – अब यो पेस्टलाई अनुहारमा लगाउने र आधा घण्टा त्यसै छाड्ने । – त्यसपछि सफा पानीले अनुहार पखाल्नुपर्छ ।
– लसुनको रस निकालेर उक्त रस कपासले अनुहारको कालो दाग धब्बा भएको ठाउँमा लगाउनुपर्छ । – अनुहारको कुनै पनि दाग हटाउन लसुन र महको पेस्ट बनाएर स्क्रब गर्न सकिन्छ ।